सबैका आँखा ठुला मुद्दामा,साना व्यवसायीका मर्का कस्ले सुन्ने ? - Arthapage
सबैका आँखा ठुला मुद्दामा,साना व्यवसायीका मर्का कस्ले सुन्ने ?
प्रकाशित मितिः January 14, 2020 January 14, 2020
नेपालगञ्ज २९ पुस -नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ तीन हजार बढि उद्योगी, व्यवसायी सदस्य रहेको बाँकेको अग्रणी संस्था हो ।
उद्योगी, व्यवसायीको हकहित मात्र होइन कतिपय सार्वजनिक मुद्दामा समेत उसले खेल्ने भूमिकाले अर्थ राख्छ ।
यही संस्थाको आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि यतिबेला उम्मेदवारहरु घरदैलोमा छन् ।
उम्मेदवारहरु बिभिन्न प्रतिबद्धता मार्फत मत मागिरहेका छन् । उम्मेदवारका घोषणा–पत्र आउन बाँकी नै छ । घोषणा–पत्रमा के–के उल्लेख हुन्छ भन्ने विषय चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
यसअघिको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने हरेक प्यानलले जारी गर्ने घोषणा–पत्रमा ठूलो मुद्दालाई प्राथमिकता दिने र साना मुद्दालाई वास्तै नगर्ने गरिएको छ ।
अर्थपेजले निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै प्यानलसंग खासै नजोडिएका केही व्यवसायीसंग वार्तालाप गरेको छ । बिपीचोकमा रहेका फर्निचर र ग्यारेज सन्चालन गर्ने व्यवसायीसंको कुराकानीको निष्कर्ष के हो भने उनीहरुलाई आईपर्ने सानातिना समस्या समाधान गर्न संघ तयार छैनन् ।
‘जिल्लामा विकासको मुल फुटाउने कुरा गर्छन । त्यो पनि गर्ने हो नगर्ने होइन तर हाम्रा सानातिना कुरा कस्ले सुन्ने ?’ बिपीचोकमा रहेका एकजना व्यवसायीले भने–‘हाम्रो व्यापार डुबेर हैरान हुँदा, पैसा फस्दा कहिल्यै चासो दिइदैन । यस्तो काममा संघमा पुगेपछि हेर्नु पर्दैन ?’ ती व्यवसायीले ऋणमा डुबेर सडकमा आएका व्यवसायीलाई फेरी व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन साथ दिनुपर्ने, पैसा फसेको अवस्थामा उठाउन समन्वय गरिदिनुपर्ने जस्ता मुद्दालाई संघले बिर्सिन नहुने बताउँछन् ।
‘सानो लगानीमा शुरु भएको व्यवसायमा समस्या आउँदा त्यो व्यवसायी घर न घाटको हुन्छ । त्यस्ता व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने गरी कुनै कल्याणकारी कोष ल्याउन सक्नुपर्छ ।’– अधिकांस व्यवसायीको तर्क छ ।
साना व्यवसायीको बुझाई संघमा साना लगानीका व्यवसायीको बाहुल्यता छ । तर संघ र उनीहरुबीच कयौ मुद्दामा ‘ग्याप’ देखिन्छ । ‘संघले सबै प्रकारका मुद्दा समाधान नगर्न सक्छ तर व्यवसायीले अपनत्व महसुस गर्ने गरी समन्वय गरिदिनुपर्छ ।’– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्,–‘व्यवसायीका नेताले साना ठुला सबै व्यवसायीको मर्म बुझ्न सक्नुपर्छ ।’
प्रकाशित मितिः 9:22:18 AM |
Prevअस्ताए घरवारीटोलका युवा व्यवसायी कडायत
Nextकुन बैंकका सिइओले एक बर्षमा कति लिए तलब सुविधा ?